Yusuf Garaad: Maxaabbiista Dagaalka oo Soomaaliya ku soo laabtay - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Sagaal iyo Tobnaad
Maxaabbiista Dagaalka oo Soomaaliya ku soo laabtay - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Sagaal iyo Tobnaad
Madaxweynaha oo soo dhoweynaya Maxaabbiista dagaalka
Waa Talaado. Taariikhdu waa 23 August sannadka 1988. Waxaa maanta billaabanaya isu celinta maxaabbiista dagaalka ee Soomaaliya iyo Ethiopa.
Waa maalinta iigu horreysa ee aan arki doono rag aan magacyadooda hayo. Xaasaskooda iyo carruurtooda aan aqaan. Qaar aan hooyinkood ama aabbayaashood la kulmay. Qaar aan Muqdisho kula kulmay. Qaarna aan kula kulmay safarkii dheeraa ee aan ku maray dalka intiisa badan.
Gelinka hore ee maalintaas Talaadada ah waxaan dirqi uga baxsaday in aan anigu xabsi galo. In howshaas oo shaqaale fara badani ku jirayna, aanay aniga iyo mas’uuliyiin kale oo la isla keen xiri lahaa aanay darteen u baaqateen. Sidii darteedna waxaan halis u galnay in aan maalintaas gefno.
Nooca gaariga uu watay Sarkaalku
Waxaan wadannaa saddex gaari - laba Landcruiser oo ICRC ah iyo baabuur jeep ah oo uu wato mas’uulka amnigu. Sarkaalka amnigu dhar rayid ah ayuu qabaa, laakiin gaariga uu wato waxaa marsan midabka Xoogga Dalka.
Maxaabbiista Soomaaliyeed oo Xamar ka soo degay
Madax badan oo uu Hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Siyaad Barre ayaa goobta jooga. Waxaa wehliya Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa mas'uulka saddexaad ee dalka ugu sarreeya, Wasiirka Gaashaandhiigga iyo madax kale oo badan.
Taxanuhu wuxuu u gudbi doonaa, soo dhoweyntii maxaabbiista Soomaaliya oo badankood saddex duullimaad ku yimid dalka. Iyo maxaabbiistii Ethiopia oo ciidan iyo shacab leh oo 10 maalmood la daad gureynaya, jawiga gegida dayaaradaha ee Dire Dawa waxay ahayd. Waxaa kale oo aan taaban doonaa maxaabbistii Soomaaliya markii ay ku soo laabteen sida loola dhaqmay iyo inta aan ka warqabo waxa ay maanta, 2018, ku sugan yihiin.
Posted by Yusuf Garaad at 18:58:00